Nweta ihe karie na igwe ahia anyi | Robot ahia
(Ọ dị mma ịma…)
ihe karịrị 1 afọ (AR)
ihe karịrị afọ 4 (AR)
ihe karịrị afọ 7 (AR)
N'ime afọ 1 (SR)
N'ime afọ 4 (SR)
N'ime afọ 7 (SR)
Nweta ihe karie na igwe ahia anyi
Ga-achọ inweta ego na-enweghị atụ na / ma ọ bụ gbasaa itinye ego gị, na-enweghị ya na-eri oge, na-enweghị nrụgide mmụọ, yana ọbụnadị na-enweghị ihe ọmụma banyere ahịa ma ọ bụ mmemme?
nos Robot ahịa na-anọchite anya ezigbo azịza, kpee onwe gị ikpe:
Ihe ngosi nke igwe ahia anyi
Youtube njikọ - cliquer ici - ka i wee tinye okwu okwu n'asụsụ gị na vidiyo ahụ - esi eme? -
Ihe ngosi vidio Ihe ngosi nke ahia anyi
Ike gwụrụ gị ịnweta obere mmasị?
Ọ ga-amasị gị irite uru na ahịa ngwaahịa, ma ị nweghị ihe ọmụma dị mkpa ma ọ bụ na ị nweghị oge iji lekọta ya? Ikekwe ị na-atụ egwu mkpọka na itinye ego na-enweghị atụ ma ọ bụ ikekwe ịchọrọ ịgbanye ego gị?
Obi zuo gị ike : anyị nwere ihe ngwọta maka gị!
You maara na ọ ga-ekwe omume ịkọ nkọ na ngwaahịa ahịa, na-enweghị ime ihe ọ bụla, na-enweghị ihe ọmụma pụrụ iche na mepụta ezigbo ego?
Mba ọ bụghị nrọ, ma ọ bụ ojoro, ma azịza!
Olee otú? Ekele maka algọridim ndị anyị mepụtara na nke na-enyocha CAC ma ọ bụ DAX iji zụta na ire ere na-akpaghị aka, na-enweghị aka mmadụ.
Ọ bụ ego kachasị mma maka mee ka ego gị too!
Afọ arụmọrụ 1 afọ na-enye gị ozi ziri ezi.
Nwere mmasị? Mee ọsọ ọsọ, n'ihi na erere igwe anyị na ọnụọgụ ole na ọnụ ahịa a na-enye ugbu a.
Olee otu igwe ọrụ ahia anyị si arụ ọrụ
Youtube njikọ - cliquer ici - ka i wee tinye okwu okwu n'asụsụ gị na vidiyo ahụ - esi eme? -.
Njikọ: A na-eji algorithms ahụ arụ ọrụ algorithms anyị ProOrder nke ikpo okwu Oge ProReal, site na Bank IG Bank.
Rịba ama: Anyi ejighi oru na ProRealTime na / ma obu IG Bank ma anaghi anata ha ikike obula.
CAC: France 40 Ego (€ 1) - CAC - Ndepụta nke 40 ndị nnọchi anya French kachasị na ahịa.
CFD: A CFD bụ ngwaahịa ewepụtara nke na - eme ka ọ dị mfe ma dịkwa ọnụ ala ịkọ nkọ banyere ụdị ego dị iche iche.
DAX: Germany 30 Ego nkịtị (€ 1) - DAX - Ndepụta nke 30 ọtụtụ ndị nnọchi anya German na ahịa.
N'abalị: Ọ bụrụ na enwere ọnọdụ na njedebe nke nnọkọ (na-abụkarị 23: 00PM) enwere ike itinye ego ịkwụ ụgwọ n'abalị na-adabere na ọnụ ọgụgụ zuru oke nke ọnọdụ ahụ.
Ederede vidiyo Otu ọrụ igwe ahia anyị si arụ ọrụ
Ejiri algorithms anyị na ProOrder modul nke ngwanrọ ProRealTime, site na Banque IG Bank. Ha na-azụ ma na-ere kpamkpam na-akpaghị aka.
Igwe anyị na - enyocha ahịa anyị CAC ma ọ bụ DAX ma mee mkpebi ha n'ezi obi, na-eso kpọmkwem atụmatụ guzobere.
Don'tchọghị ihe ọmụma ọ bụla n'ahịa ahịa ma ọ bụ na mmemme na injin anyị ga-arụ ọrụ ọbụlagodi mgbe agbanyụrụ kọmputa gị.
Uru nke injin anyị
Kọ nkọ na ahịa ahịa site na iji algọridim anyị na-anọchi anya mgbasawanye nnabata ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ịnata ọmụrụ nwa dị ntakịrị.
Ọchịchọ metụtara uche na-arụkarị ọrụ aghụghọ dị nnọọ njọ ka ndị na-akọ nkọ. Na injin anyị, ihe egwu a adighi.
A na-emechi ọnọdụ niile n'otu ụbọchị iji ịghara ịkwụ ụgwọ ụgwọ ego abalị.
Nke a na - ezere oghere ọ bụla nwere ike ime n'abalị ma ọ bụ na ngwụsị izu.
N'ihi uru nke CFDs ọ dị mfe irite karịa. Anyị na-egosi gị otu na ibe Nweta +.
Cikpụrụ nke atụmatụ ahụ
Ọ bụrụ na ọnọdụ ụfọdụ ezute, robot ga-etinye obere usoro ịzụta ma ọ bụ ree mkpụmkpụ megide nduzi nke isi omume.
Nke a bụ usoro dị irè, n'ihi na ngwaahịa ahịa nso ọtụtụ oge.
Investors ndị na-eji omume na-eso usoro ga-ewere ọtụtụ obere ọghọm tupu ha enwee ike irite nnukwu uru. Usoro a, nke dịkwa oke irè, nwere ọghọm nke ịchọ ọtụtụ mkparịta ụka.
Ngwa ahia anyị ji a Were Uru (nke elu) na a Kwụsị Loss (ala) imechi ahia. Ọ bụ ezie na n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ, a ga-emechi ha ngwa ngwa.
Ha na-arụsi ọrụ ike n'oge awa mmeghe nke mgbanwe ngwaahịa, site na elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere 00:17 nke mgbede. Ọ bụ n'oge a ka mgbasa bụ dị ọnụ ala na na volatility bụ nke kachasị elu.
Ngwongwo ahia anyi dabere na kandụl na 30 nkeji. O nweghi ihe jikọrọ ya na ahia ahia di elu nke, n'aka nke ya, na-ahazi ọtụtụ puku azụmahịa kwa nkeji, nke edebere maka ụlọ ọrụ ndị ọkachamara ga-enwerịrị ike iji nnukwu ego zụọ ahịa. Ndị ahụ bụ CES robot ndị nwere akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma, na ezi ihe kpatara ya, ebe ọ bụ na ha na-agbanwe agbanwe ego nke ngwa ego ha na-ere ka ha wee rite uru na ha.
Nkọwa banyere algọridim anyị
Ngwa ahia anyị na-eji Supertrend> egosi na a Na-agagharị nkezi iji chọpụta ntuziaka nke isi ihe.
Ha na-eji Bollinger Bands na Stochastic Oscillator chọpụta mgbanwe ndị na-ewu ewu.
Ha leverage ADX na ADXR iji chọpụta ike nke usoro a.
Ha na-ezo aka na ndị na-egosi ihe ngosi dị iche iche iji nyocha ahịa ndị nwere ike ịdị egwu.
Ha na-eji ndị ngosi ọzọ iji kwụsị ahia ahụ na mbụ dabere na ọnụahịa ahịa.
Mgbe ụfọdụ, ha na - eme ka ọghọm Kwụsị nkwụsị.
A na-ejikwa rọbọt anyị niile enweta uru (karịa) na nkwụsị nkwụsị (ala).
Kedu ihe eji egosi ndị ọrụ aka?
ADX et ADXR : ha tụọ ikike ịkwaga ọnụahịa ahụ na mpụga ọdịiche nke oge gara aga.
Ndị agha Bollinger : a na-eji ha egosi oke oke na oke ọkwa. Ha na-egosi ma ahịa ahụ ọ dị jụụ ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe.
Na-agagharị nkezi : ha gosiputara uru ọnụahịa karịrị oge enyere. Ha nwere mmetụta nke ire ụtọ ahịa.
Stochastic : ọ bụ oscillator nke na-ekpughe mpaghara nke ịzụrụ ihe na ire ere.
Chika Okpala : ọ na-agbanwe n'elu ma ọ bụ n'okpuru ọnụahịa dabere na omume. Ọ na - enyocha nzacha obere ihe a.
VIDIO AGBANWE AKA
Ngwongwo ahia anyị na-arụ ọrụ
Indices na Ego njikwa
Nchịkwa ego na Akụkọ
Ahịa na Robot Trading
Copyright © 2020 - Robot-trading.io Ikike niile echekwabara